> Resource> Windows> Windows 7 jiri (Blue / Black ihuenyo, Ifriizi, ịgbanyụ, wdg)
Untill Windows 7, Windows aghọwo ihe anụ dị ka ọ na matured, na ọ bụ n'ezie ike daa. Otú ọ dị, ọ dịghị Dakwasị, na ihe mere maka usoro okuku bụ otu dị ka na XP ụbọchị. O nwere ike ịbụ buut faịlụ okuku, loading faịlụ okuku, ma ọ bụ random okuku, na-ewetara gị a nwa /-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo, ihuenyo kefriza, usoro rebooting, wdg
Windows 7 akụghịna nwere ike inwe ọtụtụ dị iche iche ihe mgbaàmà. Behind ọ bụla okuku nziputa, e nwere ike nwere ihe karịrị otu ihe kpatara ya. Otú ndozi Win 7 okuku nsogbu? E wezụga reinstalling usoro, e nwere ụzọ ọzọ idozi ya na ka ị na-gị data emebibeghị. Niile ị chọrọ bụ a Windows 7 bootable CD ma ọ bụ USB mbanye. Ọ bụrụ na ị na-adịghị otu, ebe a bụ m nkwanye: Wondershare LiveBoot buut CD / USB. Ị nwere ike iji ya na-eme a bootable CD ma ọ bụ USB mbanye maka Windows 7 site onwe gị.
3 nzọụkwụ idozi Windows 7 mkpọka n'okpuru
Mgbe ịzụta a software, ị ga-enweta a download njikọ na a akwụkwọ ikike site n'aka Wondershare. Download na wụnye ya na ezi-na-arụ ọrụ na kọmputa, na mgbe ahụ na-eso nzọụkwụ n'okpuru na-esi gị Windows 7 okuku nsogbu mere.
Step1. Mee ka a bootable CD / USB mbanye n'ihi na gị Windows 7
Tupu ịlụ malitere, kwadebe ide CD ma ọ bụ USB mbanye (ị ga-eji ha na-eme ka a bootable disk). Na-agba ọsọ usoro ihe omume na fanye CD ma ọ bụ USB mbanye n'ime kọmputa. Mgbe na-LiveBoot ọkachamara dị ka ndị na, họrọ kwesịrị ekwesị ndu n'ihi na ị na ọkụ a bootable CD ma ọ bụ USB mbanye. Ihe niile ị chọrọ ime bụ pịa na green ọkụ button, na gị bootable CD ma ọ bụ USB mbanye ga-mere.
Step2. Nweta gị Windows 7 na bootable CD / USB
Ọzọ, ịgbanwee gị jiri Windows 7. Fanye bootable CD ma ọ bụ USB mbanye n'ime kọmputa na Malitegharịa ekwentị ya. Mgbe usoro amalite Ibu Ibu, pịa F12 ozugbo gaa buut Ngwaọrụ NchNhr. Wee họrọ "onboard ma ọ bụ USB CD-ROM Drive", ị ga-enweta a buut menu dị ka ndị na. Pịa "buut si LiveBoot" ga-esi n'ime gị jiri Windows 7.
Step3. Idozi gị "Windows 7 okuku" nsogbu
E nwere ọtụtụ ngwọta maka Windows 7 mkpọka dị ka buut okuku ngwọta, n'idebata okuku ngwọta, random okuku ngwọta, weghachi ndabere ngwọta na ngwọta ikpeazụ. Dị ka ihe mgbaàmà ị ga-esi si gị Windows 7 okuku, na-ahọrọ nri otu idozi ya.
Buut Crash Mgbaàmà: Mgbe ị na-amalite na kọmputa, mgbe ọ mkpọka na a nwa ihuenyo. Ị na-mgbe ike na-esi na Windows loading mmanya. I nwere ike na-edebe njehie ozi dị ka "Ntldr na-efu", "njehie loading sistemụ" na nwa ihuenyo.
Loading Crash Mgbaàmà: Mgbe ị na-amalite na kọmputa, mgbe ọ mkpọka ma ọ bụ freezes na Windows loading mmanya ma ọ bụ Windows welcome ihuenyo. Ị nwere ike nweta site na Windows loading mmanya, Otú ọ dị Ị na-mgbe ike ga-esi n'ime Windows. I nwere ike na-edebe ihuenyo kefriza, ịgbanyụ ugboro ugboro,-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo ma ọ bụ nwa na ihuenyo.
Random Crash Mgbaàmà: Your Windows mkpọka niile na mberede. Mgbe ịgbanyụ kọmputa, ị nwere ike nweta n'ime Windows mgbe ụfọdụ. Otú ọ dị, ọ na-eme ugboelu enweghị usoro. I nwere ike na-edebe-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo ma ọ bụ nwa na ihuenyo.
Weghachi ndabere Ngwọta: Ọ bụrụ na ị kwadoo gị Windows ma ọ bụ kọmputa iji anyị ndabere ngwaọrụ, biko nanị weghachi gị Windows si ebe a.
Final Ngwọta: Ọ bụrụ na onye ọ bụla nke ndị a n'elu dabara gị mgbaàmà ma ọ bụ idozi gị okuku sypmtoms, biko jiri ikpeazụ a ngwọta.
Mgbe nsogbu ofu, wepụ nke LiveBoot CD / USB mbanye, na Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa ka nkịtị. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ na i nwere ike buut kọmputa gị ọma ka nkịtị.
Olee otú idozi ya: Windows 7 Nọgidere Na-eme ibidogharịa
Idozi Windows XP Black ihuenyo Njehie
Olee otú ịgbawa Windows 7 Paswọdu
Olee otú Idozi Windows 7 freezes enweghị usoro